လက်တွေ့ဘဝတွင် စူပါပါဝါ တကယ်ရှိကြောင်း သက်သေပြနိုင်မည့် သတ္တဝါ ၁၀ ကောင် - ONE DAILY MEDIA
စူပါဟီးရိုးများကို ရုပ်ရှင်များတွင်သာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးဟာ မယုံနိုင်စရာ စူပါပါဝါအချို့ ရှိနှင့်ပြီးသားပါ။
မည်သည့်စူပါဟီးရိုးများထက်မဆို ပို၍ အံ့သြစရာ၊ ရယ်စရာ၊ ထူးဆန်းပြီး တစ်ခါတစ်ရံ ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသော စွမ်းရည်ရှိသတ္တဝါများကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏အဆုံးထိဖတ်ကြည့်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည် ဖုတ်ကောင် apocalypse ကို ယုံကြည်ပါက အဆုံးမှ BONUS ကို သင်သ‌ဘောကျမိမှာပါ။
1. မသေနိုင်သော ရေခူ
ဤဂျယ်လီငါးဟာ planula ဟုခေါ်သော လွတ်လပ်စွာကူးခတ်နိုင်သော သေးငယ်သော ဆေးစက်တစ်ခုသဖွယ် ၎င်း၏ရှင်သန်မှုစတင်ကာ polyps တစ်ခုအဖြစ်သို့‌ရောက်ပြီး ရေခူအဖြစ် ကြီးထွားလာတာပါ။ ၎င်းဟာ တိုက်ခိုက်ခံရပါက သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဖိစီးမှုများနှင့် ထိတွေ့မိပါက သို့မဟုတ် ရိုးရိုးဖျားနာ သို့မဟုတ် အိုမင်းသွားပါက ၎င်းသည် မသေနိုင်သော polyp အသစ်တစ်ခု အဆင့်သို့ ပြန်သွားနိုင်ပါတယ်။
2. ပွေးသတ္တဝါ -ကြွက်
ဤကြွက်များ၏အရေပြားတွင် နာကျင်မှုအချက်ပြမှုများကို ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နို့တိုက်သတ္တဝါများတွင်ပါရှိသော အရာမရှိပါဘူး။ ထို့ကြောင့် ဤကြွက်များသည် နာကျင်မှုကို မခံစားရပါ။ ဤကြွက်သည် ကင်ဆာရောဂါကို အလွန်ခံနိုင်ရည်ရှိသောကြောင့်လည်း လူသိများပါတယ်။
ဒီတိရစ္ဆာန်လေးတွေဟာ သဘာဝရဲ့ အသက် အပြင်းဆုံး သတ္တဝါအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရပြီး သူတို့ကို သတ်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်သလောက်ပါပဲ။ ၎င်းတို့သည် အလွန် လွန်ကဲသော အခြေအနေများကိုပင် ရှင်သန်နိုင်ပါတယ်။အပူချိန် -458°F (-272°C) မှ 300°F (150°C)၊ ဖိအား 40,000 kPa အထိ အလွန်မြင့်မားသော ဓါတ်ရောင်ခြည်များ ၊ လစ်ဟာနေသော လေဟာနယ်နေရာလွတ်များ ကြားတွင် အစာရေစာ မရှိဘဲ နှစ် 30 ကျော် နေနိုင်ပါတယ်
ဤဖားသည် keratin မဟုတ်ဘဲ အရိုးဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး ပုံမှန်လက်သည်းအစစ်များမဟုတ်သည့် လက်သည်းများကြီးထွားရန်အတွက် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အရိုးများကို ချိုးဖျက်နိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် လက်သည်းတစ်ချောင်းစီသည် လက်ချောင်းများအတွင်း၌ ရှိနေပါတယ်။ ဖားသည် စိတ်ဖိစီးလျှင် သို့မဟုတ် တိုက်ခိုက်ခံရပါက ဓားနှင့်တူသော ချွန်ထက်သော လက်သည်းများက အရေပြားကို ဖြတ်ကာ အရိုးများကို ကျိုးစေနိုင်ပါတယ်။ Wolverine လိုပါပဲ။
5. Mantis ပုစွန်
ဤပုဇွန်တွင် အလွန်ပြင်းထန်သောလက်နက်ရှိပါတယ်။ အလွန်ချွန်ထက်ရုံသာမက 53 mph (23 m/s) ဖြင့် အရှိန်မြှင့်နိုင်သော အားကောင်းပြီး တူနှင့်တူသော လက်သည်းများရှိပါတယ်။ သိပ္ပံပညာရှင်များက ၎င်းတို့ကို ထူထဲသော ပလတ်စတစ် လှောင်အိမ်များတွင် ထားပါတယ်။အကြောင်းမှာ အချို့သော မျိုးစိတ်များက ဖန်လှောင်အိမ်ကိုပင် ဖောက်ထွင်းနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
အသွင်‌ယူရေဘဝဲဟာ အခြားဒေသခံမျိုးစိတ်များကဲ့သို့ အယောင်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ၎င်းတို့၏ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်အတွက် ၎င်းတို့၏ အသားအရောင်နှင့် အသွင်အပြင်ကို ပြောင်းလဲပေးရုံသာမက အရာဝတ္ထုနှင့် တိရစ္ဆာန်အမျိုးမျိုး၏ ပုံမှန်အပြုအမူနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်ကိုလည်း ကူးယူနိုင်ပါတယ်။
ဤပုံမှန်မဟုတ်သော ဘဲတူဖျံတူဟာ သားပေါက်များကို ဥဥသည့် တစ်ခုတည်းသော နို့တိုက်သတ္တဝါဖြစ်ပါတယ်။ Platypuses တွင် လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုများကို ခံစားသိရှိနိုင်‌ သော ဆဌမအာရုံ ရှိပါတယ်။ ၎င်းတို့သည် လျှပ်စစ်စက်ကွင်းတစ်ခု၏ မတူညီသောအဆင့်များနှင့် ရွေ့လျားမှုများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ပြီး ငါးမန်းကဲ့သို့သော ရန်သူများကို ရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်။ ရှာတွေ့ခြင်းမခံရမှီ ရိုးရှင်းစွာ ကူးခတ်သွားနိုင်ပါတယ်။
8. Criocerinae အရွက်ပိုး
ဒီအင်းဆက်သားလောင်းတွေက သူတို့ကိုယ်သူတို့ ခုခံကာကွယ်ဖို့ နည်းလမ်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဟာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ အစားမခံရအောင် သူတို့ရဲ့အညစ်အကြေးတွေနဲ့ ဖုံးအုပ်ထားပါတယ်။ အံ့ဖွယ် စူပါပါဝါ ပါပဲ။
သူတို့ခြေထောက်တွေက ခုန်နိုင်အား‌ ကောင်းပါတယ်။ သန်းတစ်ကောင်သည် အမြင့်7လက်မ (18 စင်တီမီတာ) ၊ အရှည် 13 လက်မ (33 စင်တီမီတာ) အထိ ခုန်တက်နိုင်တာကြောင့် တိရိစ္ဆာန်များအကြားတွင် (၎င်း၏ ခန္ဓာကိုယ် အရွယ်အစားပေါ်မူတည်ကာ) Olympic Jumper ဖြစ်စေပါတယ်။
အချို့သောငှက်များသည် အသံအမျိုးမျိုးကို တုပနိုင်သောကြောင့် လူသိများသော်လည်း ဤငှက်များဟာ သံကြိုးသံများ၊ မီးအချက်ပေးသံများ၊ ကင်မရာပိတ်များ သို့မဟုတ် ရထားသံများပင် တုပနိုင်ပါတယ်။ စကားပြောကြက်တူရွေးအတွက် အမိုက်စား အစားထိုးမှုပါပဲ။
BONUS – Cordyceps – Zombie မှိုကောင်
ဤမှိုသည် အခြားအင်းဆက်များ၏ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းတွင် ပေါက်ပွားနိုင်စွမ်းရှိပါတယ် ။ ၎င်း ပိုးမွှားများသည် အင်းဆက် (ခူကောင်၊ ပင့်ကူ သို့မဟုတ် ပုရွက်ဆိတ်) ကို တိုက်ခိုက်ပြီး တစ်သျှူးကို ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဖြင့် အစားထိုးပြီးနောက် ၎င်းသည် ခန္ဓာကိုယ်အပြင်ဘက်တွင် မှိုညွန့်များကို ထုတ်ပေးပါတယ်။ ထိုအချိန်တွင်၊ အင်းဆက်၏တစ်သျှူးသည် မှိုများလွှမ်းသွားပြီး တစ်နည်းဆိုရသော် ၎င်းသည် ပုရွက်ဆိတ်မဟုတ်တော့ဘဲ ပုရွက်ဆိတ်ပုံစံ
cordyceps ဖြစ်လာပါတယ်။ ဂြိုလ်သား apocalypse နဲ့တူတယ်။
သတိပြုရန် – မိခင်သဘာဝတရားကို ဘယ်တော့မှ လျှော့မတွက်ပါနဲ့။ ဒီသတ္တဝါတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းဟာ ယုံရခက်ပါတယ်။ သူတို့၏ စွမ်းအားများဟာစူပါဟီးရိုးများကိုပင် မနာလိုဖြစ်စေပါတယ်။